ငြိမ်းချမ်းအေး| June 7, 2012 | Hits:15,352
55 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ဇိုး ဇိုး June 7, 2012 - 2:20 pm	ဟုတ်ပါတယ် ဇိုး တို့ မမွေးခင်ကတဲက မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ အခြား ဘာသာဝင်တွေလဲ ၇ှိနေကျတာပါ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ အတူတူနေကျတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါပဲ
Reply	ko ko June 7, 2012 - 7:01 pm	Incredible…..!!! 🙂
Ko Nyi Nyi doe lo lu tway atwat tot….. ho har ko video pya p…..ho har ko platar kway nay ta loe…phyit nay tar pop…!!!